Sagootin Le Professionnel: Xiddiggii caanka ahaa ee Faransiiska Jean-Paul Belmondo ayaa dhintay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Entertainment » Sagootin Le Professionnel: Xiddiggii caanka ahaa ee Faransiiska Jean-Paul Belmondo ayaa dhintay
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Entertainment • Wararka Fashion • France Breaking News • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Filimmada Belmondo waxaa si wada jir ah looga daawaday tiyaatarada 130 milyan oo jeer.
Jean-Paul Belmondo wuxuu ku dhintey da'da 88.
Halyaygii warshadaha aflaanta Faransiiska ayaa dhintay.
Jilaaga ayaa xanuunsanaa in muddo ah kadib markii uu istaroog ku dhacay 2001 -dii.
Halyeeygii shineemada Faransiiska Jean-Paul Belmondo, oo caan ku noqday caannimadii Jean-Luc Godard ee kacaankii New Wave classic “Neefsasho la’aan”, ayaa geeriyooday isagoo 88 jir ah, sida uu xaqiijiyay qareenkiisa.
Jean-Paul Belmondo wuu dhintay
Jilaaga ayaa xanuunsanaa muddo markii uu ku dhacay istaroogga sanadkii 2001.
Belmondo-dhagaystayaasha Faransiisku waxay ku naanaysiiyaan Bébel-wuxuu noqday mid ka mid ah sanduuqii ugu weynaa sanduuqii Faransiiska Wave New ee sanadihii 60-meeyadii iyo 70-meeyadii, wejigiisa oo aad loo garaacay ayaa ka soo horjeeday astaamihii is-afgaranwaaga ahaa ee ay wada-shaqayn jireen Alain Delon.
Wuxuu ku dhashay 1933 xaafadda wanaagsan ee Paris ee Neuilly-sur-Seine, oo ah sawir-qaade “pied-noir” Paul Belmondo, Belmondo wuxuu aaday iskuullada gaarka loo leeyahay ee aadka loo yaqaan laakiin si liidata ayuu sameeyay. Waxa uu muujiyey xiise badan oo xagga cayaaraha ah, wuxuuna bilaabay xirfadda feerka feerka ee hiwaayadda isagoo dhallinyaro ah. Ka dib markii uu ku dhacay cudurka qaaxada, wuxuu xiiseynayay inuu sameeyo, wuxuuna ka codsaday Akadeemiyada Qaranka ee Farshaxanka, ugu dambayntii wuxuu boos ka helay 1952.
Ka dib qalin -jabinta, Belmondo wuxuu bilaabay jilitaanka masraxa, isagoo ka soo muuqday riwaayado Anouilh, Feydeau iyo George Bernard Shaw. Waxa kale oo uu helay taxane kaalin filimo yar ah.
Laga bilaabo doorkiisa Jean-Luc Godard ee "Neef la'aan," wuxuu noqday shaqsi udub dhexaad u ah shineemada New Wave ee Faransiiska. Waxaa laga yaabaa inuu caan ku yahay doorarkiisa riwaayadaha dambiyada iyo kuwa xiisaha leh, wuxuu sidoo kale ku jilay melodramas Romy Schneider iyo Alain Delon. Xitaa wuxuu caan ku ahaa inuu sameeyo khiyaanooyinkiisa.
Caafimaadka Belmondo ayaa noqday kii ugu xumaa 2001 markii uu ku dhacay istaroog waxaana la dhigay isbitaal ku yaal Paris, France. Waxa qayb ahaan curyaamiyay istaroogga wuxuuna ku qasbanaaday inuu waqti ku qaato dib u barashada socodka iyo hadalka.
Markii dambe wuu ka nastay jilitaanka laakiin wuxuu ku soo laabtay shaashadda weyn 2009 isagoo wata “Nin iyo Eygiisii”. Waxay noqotay filimkiisii ​​ugu dambeeyay oo si xun ay u soo dhaweeyeen dadka wax dhaleeceeya. Belmondo ayaa markii dambe raaligelin ka bixiyay shaqada laakiin wuxuu sheegay inay ka caawisay inuu ka adkaado saamaynta raagtay ee istaroogga.
Qareenkiisa Michel Godest ayaa sheegay in Aktarka uu ku dhintay gurigiisa oo ku yaalla Paris. “In muddo ah ayuu aad u daalay. Si deggen ayuu u dhintay. ”
FM Whatsapp -ka ah ee loo yaqaan Apk wuxuu leeyahay,
September 19, 2021 at 13: 17
waad ku mahadsan tahay wadaagista xog dhammaystiran oo nabadeed fadlan sii.